Waatan Shuruuda Kaliya Ee Ay Tahay In Man United Ay Buuxiso Si Ay Gacanta Ugu Soo Dhigto Daafaca La Qiimeeyo Ee Dayot Upamecano - Gool24.Net
Waatan Shuruuda Kaliya Ee Ay Tahay In Man United Ay Buuxiso Si Ay Gacanta Ugu Soo Dhigto Daafaca La Qiimeeyo Ee Dayot Upamecano
Daafaca dhexe ee kooxda Red Bull Leipzig ee Dayot Upamecano ayaa la filayaa inuu noqon doono mid suuqa aad looga doonayo xagaaga sanadka dambe marka uu dhaqan galo qoddobka la wada sugayo ee qiimaha heshiiskiisa hoos u dhigayaa.
Xiddigan soo kacaya ayaa xilli ciyaareedyadii ugu dambeeyay qaab ciyaareed wanaagsan soo muujinayay isaga oo loo arko mid kamida daafacyada da’yarta ah ee ugu wanaagsan Yurub.
Upamecano oo 22 sano jir ah ayaa kooxda tababare Julian Nagelsmann wacdarro kusoo dhigay xilli ciyaareedkii hore isaga oo kasoo caawiyay inay gaadhaan wareega afar dhammaadka ee Champions League waxaana uu doortay inuu kooxda sii joogo walow ay kooxo badani doonayeen isagoo heshiis cusub saxeexay.
Heshiiska cusub ayaa ah mid uu ku jiro qoddob ogolaanaya in sanad kaddib lagu heli karo lacag aad uga jaban 52ka Milyan ee Pound ee hadda ku xidhan oo ah 40 Milyan oo Pound.
Iyadoo ay u badantahay in Dayot Upamecano uu badhtamaha sanadka dambe iskaga tagayo kooxda ree Germany ayaa lagu wadaa in heshiiskiisa la dhammayn doono kahor tartanka Euro.
Bayern Munich iyo Paris Saint-Germain ayaa la filayaa inay horay kasoo gali doonaan tartanka si lamid ah Real Madrid ayaa la filayaa inay iyaduna u dhaqaaqi doonto maadaama oo uu tababare Zinadine Zidane taageere weyn u yahay da’yarka.
Sidoo kale Man United ayaa dhinaceeda ka doonaysa waxaana ay u badantahay inay baahi intii hore ka badan u qabi doonaan maadaama oo ay dhibaato daafac hadda dhexda kaga jiraan.
Si kastaba, shuruuda uu Upemecano ku xidhayo kooxaha doonaya oo ay ugu horreyso Man United ayaa noqon doonta inay kooxdu Champions League ciyaarayso kooxdu xilli ciyaareedka dambe.